एमाले विवादः पार्टीलाई जेठ २ अघि फर्काउने कि जेठ २ पछि लैजाने ? - HongKong Khabar
एमाले विवादः पार्टीलाई जेठ २ अघि फर्काउने कि जेठ २ पछि लैजाने ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०२, २०७८ समय: १९:१५:२९
काठमाडौं । आज जेठ २ गते । नेकपा एमालेको विद्रोही समूहले संस्थापन पक्ष(ओली) सँग २०७५ जेठ २ गते अघि फर्किनु पर्ने अडान राखिरहेका बेला आज राजधानीमा दुई समूहका नेताबीच बृहत् छलफल भएको छ । यो छलफलले अब पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघि फर्काउने कि २०७८ जेठ २ पछि लैजाने भन्ने विवादको टुंगो लगाउन संस्थापन पक्ष र माधव नेपाल पक्षका पाँच–पाँच सदस्य रहेको वार्ता टोलीले लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेताबीच भएको भेटमा नेपालले यसलाई वार्ता टोलीको नाम दिए । ओली पक्षबाट वार्ता टोलीको नेतृत्व सुवास नेम्वाङले गरेका छन्, जसमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल पनि छन् ।
त्यस्तै माधव नेपालको पक्षबाट भीम रावलले नेतृत्व गरेका छन् भने घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सद सदस्य छन् । दुवै पक्षको वार्ता टोलीलाई तीन दिनको समय दिइएको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालका अनुसार समय अपुग हुँदा थप गर्न सकिने छ । तर, जेठ ६ को राष्ट्रियसभा चुनावमा माधव नेपाल पक्षको भूमिका के हुने भन्ने बारे भने नेपालले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । वार्ता टोलीले नै आफ्ना ६ बुँदे माग र जेठ २ मा पार्टीलाई फर्काउने मस्यौदा प्रस्ताव गर्ने छन् ।
वार्ता टोलीमा ओली पक्षको नेतृत्व गरेका नेम्वाङले यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभइसकेकाले औपचारिक जानकारी पाएपछि कार्यादेश र समयको बारेमा छलफल हुने बताए ।
तल्ला तहका कमिटीहरूको हकमा अझ बढी समस्या रहेकाले वार्ता टोलीबाटै आउने सुझाव र सहमतिका आधारमा अघि बढिने नेताहरुले बताएका छन् ।